आज "बाल स्वास्थ्य" (बर्नाउल) हकदार क्लिनिक, को ध्यान प्रस्तुत गरिनेछ। एक संस्थाले कस्तो? यो के गर्छ? के सेवाहरू प्रदान गरिन्छ? खुसी यदि आमाबाबु र छोराछोरी, उपचार को परिणाम? क्लिनिक सबै पर्यटकहरूलाई आवास कस्तो प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ? संस्था बारे धेरै आमाबाबुले प्रतिक्रिया मदत गर्नेछ यी प्रश्नहरूको जवाफ। जानकारी प्रदान ध्यान समीक्षा भने, तपाईं क्लिनिक राम्रो छ कसरी सबैभन्दा सही निष्कर्षमा बनाउन सक्छ। त्यसैले बर्नाउल मा एक "बाल स्वास्थ्य" त्यहाँ छ र बेफाइदा के छन्? जानकारी कस्तो आमाबाबुले लागि उपयोगी हुन सक्छ?
पहिलो, गरेको यो यस्तो संस्था लागि सामान्य छ भनेर बुझ्न गरौं। म यसलाई कसरी वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ? सीडीसी "बाल स्वास्थ्य" (बर्नाउल) एक बच्चाको क्लिनिक छ। यो नाबालिग को उपचार को लागि अभिप्रेरित छ। यसबाहेक, सबै उमेरका, जन्म देखि को। विशेष ध्यान केही संकीर्ण विशेषज्ञहरु पनि वयस्क छन् भन्ने तथ्यलाई भुक्तान गर्नुपर्छ।
यो क्लिनिक - एक निजी multidisciplinary चिकित्सा केन्द्र, कहिलेकाहीं एक परिवार भनिन्छ जो। यो सेवा को एक विस्तृत जो आमाबाबु बच्चा को स्वास्थ्य संग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरू सम्बोधन गर्न राज्य बजेट चिकित्सा संस्थाहरू जान अनुमति दिन्छ प्रदान गर्दछ।
के सेवा केन्द्र "बाल स्वास्थ्य" (बर्नाउल)? वास्तवमा, आफ्नो स्पेक्ट्रम व्यापक छ। हामी लगभग कुनै पनि समस्या तपाईं क्लिनिक मा लागू गर्न सक्नुहुन्छ भन्न सकिन्छ।
मिति, डाक्टर संगठन मा काम गर्दै छन्:
यो संगठनमा यी व्यवसायीक बाहेक निवारक Vaccinations, र दिनचर्या खोप, अल्ट्रासाउंड छानबिन, नमूना संकलन गर्न निमन्त्रणा छ टिप्पण लायक छ। शारीरिक उपचार, मालिश र भौतिक चिकित्सा पनि यहाँ छन्। तदनुसार, बहु-केन्द्र साँच्चै। र यो धेरै आमाबाबुले प्रसन्न। एक विशेष मामला मा एक बच्चा सही निदान र परीक्षण उद्धार गर्न शहर भर चलाउनु आवश्यक छैन। "बाल स्वास्थ्य" (बर्नाउल) यी सेवाहरू बाहेक प्रदान गर्दछ, र थप बच्चाहरु को लागि निवारक परीक्षा र दर्ता प्रमाणपत्र। उदाहरणका लागि, Kindergartens र विद्यालय गर्न भर्ना लागि चिकित्सा कार्ड।
अब जहाँ संगठन स्थित छ बारे बिट। के सेवाहरू एक आगन्तुक प्राप्त गर्न सक्छन् केही थाहा छ। ठेगाना थाहा प्रारम्भिक आइपुग्छ। के चयन संस्थाले बारेमा भने गर्न सकिन्छ?
क्लिनिक स्थान ठेगाना हो: सडक गुरिल्ला 92, बर्नाउल। "बाल स्वास्थ्य" ठीक निर्दिष्ट निर्देशांक छ। कुनै शाखा र कार्यालय यसलाई गर्दैन। तदनुसार, यस ठेगानामा, तपाईं एक चिकित्सा केन्द्र पाउन सक्नुहुन्छ। क्लिनिक केन्द्र नजिकै स्थित छ, तर शहर को "हृदय" मा।
मेडिकल सेन्टर "बाल स्वास्थ्य" संगठन संग सम्पर्कमा रहन सम्पर्क नम्बर प्रदान गर्दछ। सबै ग्राहकहरु को लागि एक अति महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो। फोन प्रयोग पछि, तपाईं मात्र प्रदान सेवाहरू सन्दर्भमा परामर्श प्राप्त गर्न सक्छन्, तर पनि एक विशेषज्ञ संग एक नियुक्ति बनाउन। यो राम्रो र धेरै छ। को पहिले निर्दिष्ट ठेगाना मा जान कुनै आवश्यकता मात्र डाक्टर गर्न बच्चा भर्ना गर्न।
मिति, क्लिनिक पुग्न, "बाल स्वास्थ्य", तपाईं निम्न संख्या प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
8,962,812 23 93;
8,960,963 90 45।
यी नम्बर चिकित्सा केन्द्र को रजिस्ट्री सम्पर्क गर्न मद्दत छ। टेलिफोन सबै संग ग्राहकहरु रूपमा क्रममा छ। मुख्य कुरा क्लिनिक मा कल गर्न छ। अन्यथा, हैंडसेट कुनै लिफ्ट। यी सबै संख्या पछि - यो फोन घडी हटलाइन छैन।
क्लिनिक बर्नाउल मा "बाल स्वास्थ्य" एकदम केहि समय को लागि काम गर्दछ। धेरै आमाबाबुले संस्था संचालित7दिन एक हप्ता कि खुसी छन्। कि, उत्पादन उपलब्ध छैन छ।
समय तालिका निम्न सुझाव:
हप्तादिन मा - 8:00 देखि 20:00 गर्न, भर्ना परीक्षण अघि 11 AM बाहिर;
शनिबार र आइतबार - 9:00 देखि 18:00 गर्न, बार गर्न 11 AM देखि9हूँ शनिबार विश्लेषण (मलको लागि बाहेक)।
आधिकारिक छुट्टी सप्ताह व्यक्तिगत क्लिनिक काम को अनुसूची पत्ता लगाउन हुनेछ। मेडिकल सेन्टर प्रशासन समय यस्तै अवधि मा संस्थाहरु कार्य को मोड सेट गर्छ। सूचना टेलिफोन द्वारा प्रदान गर्न सकिन्छ।
के "बाल स्वास्थ्य" (बर्नाउल) टिप्पणीहरू हकदार क्लिनिक हुन्छ? धेरै आमाबाबुले यो चिकित्सा केन्द्रमा अवस्था विशेष ध्यान छन्। यो एक निजी क्लिनिक लागि एउटा महत्त्वपूर्ण क्षण हो। विशेष गरी नर्सरी।
यसलाई यहाँ स्थिति सुन्दर छ कि उल्लेख गरेको छ। सहज, चम्किलो, सफा। क्लिनिक हेर्न प्रसन्न सबैलाई - वयस्क र बच्चाहरु दुवै। एक संस्थाले रहनुहोस् भयानक छैन, म फेरि र फेरि यहाँ आउन चाहन्छन्। यो कि संगठन शाब्दिक बच्चाहरु को लागि बनाएको छ महसुस गरिएको छ। सबै विरामीहरु र आमाबाबुको सान्त्वना र सुविधाको लागि गरिन्छ।
सामान्य मा, स्थिति, मैत्री शान्त र शान्त छ। Negativity रजिस्ट्रीमा मा अवस्थित छैन, कुनै आगंतुकों। वृद्धि सान्त्वना संग स्वास्थ्य हेरविचार सेवा प्राप्त गर्न रुचि गर्नेहरूका लागि ठूलो ठाउँ।
जताततै कस्मेटिक मरम्मत गरे। क्लिनिक, "बाल स्वास्थ्य" (बर्नाउल - आफ्नो संगठन स्थित छ जसमा शहर) मा उपकरण र फर्नीचर नयाँ सेट, सबै नियमित अपडेट गरियो। धेरै आमाबाबुले संगठन गुणस्तर स्वास्थ्य हेरविचार सेवा प्रदान गर्न सबै कुरा छ याद।
क्लिनिक मा डाक्टर, "बाल स्वास्थ्य" अनुभव र शिक्षित। त्यहाँ धेरै विशेषज्ञहरु उच्चतम श्रेणी, साथै चिकित्सा विज्ञान को उम्मेदवार छन्। तर, कुनै पनि अन्य निजी चिकित्सा केन्द्र जस्तै। यो जो कोहीले अचम्म गर्दैन सामान्य घटना छ।
यसको विशेषज्ञहरु प्रतिक्रियाहरू को एक किसिम हो। तर ती सबै भन्दा सकारात्मक छन्। यो डाक्टर को सबै भन्दा व्यावसायिक र ध्यान हो भनेर उल्लेख गरेको छ। तिनीहरूले छोराछोरीलाई एउटा व्यक्तिगत दृष्टिकोण लागि देख रहे हो, अतिरिक्त विश्लेषण ठूलो जिम्मेवारी आफ्नो काम, छैन नियुक्त गरिएको छ।
तर केही नकारात्मक अंक अझै पनि उपलब्ध छैन। उदाहरणका लागि, डाक्टर कहिलेकाहीं एउटा कारण लागि फार्मेसी मा दिइँदैन छैन भनेर केही लागूपदार्थ सल्लाह दिन्छन् गर्न बिर्सन्छन्। वा धेरै अनुकूल व्यवहार। यो मानव तत्व रद्द गर्न गरिएको सम्झनुहुन्छ लायक छ। यसलाई देखि तपाईं बीमा गर्न सकिन्छ। तर सामान्य मा, भन्नुभयो गरिएको छ को रूप मा, डाक्टर आफ्नो काम खुसी छन्।
के सेवाहरूको लागत बारे? "बाल स्वास्थ्य" (बर्नाउल) - अपेक्षाकृत कम मूल्यहरु प्रदान एक चिकित्सा केन्द्र हो। यो धेरै आमाबाबुले संकेत छ। दुवै वयस्क र बच्चाहरु बजेट दर लागि क्लिनिक मा गुणवत्ता हेरविचार प्राप्त गर्न सक्छ।
उदाहरणका लागि, एक चिकित्सा विशेषज्ञ प्राप्त बारे चढाई 700-800 rubles लागत। यी दर वयस्क र बच्चाहरु दुवै लागि सान्दर्भिक छन्। अमेरिकी सीबीसी 300 rubles खर्च हुनेछ, बारे 500 rubles लागत। तपाईं सोच्न भने धेरै महँगो छैन। अस्पताल मूल्य ज्यादातर प्रोत्साहन।
पनि ग्राहक सेवा गुणस्तर ध्यान। र हामी गैर-चिकित्सा कर्मचारी बारेमा कुरा गर्दै छन्। कसरी रजस्ट्री संगठन गर्छ? सामान्य मा, ग्राहकहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, तर केही कमी र कमीकमजोरी एकदम अक्सर हाइलाइट।
"बाल स्वास्थ्य" (बर्नाउल), क्लिनिक मा गुणस्तर सेवा प्रदान गर्दछ। तर केही समीक्षा अनुसार, receptionists सधैं स्पष्ट खडा प्रश्नहरूको जवाफ हो। केही अवस्थामा, त्यहाँ एक अस्पष्टता सजिलै विश्लेषण छ - कार्यकर्ता सबै तयार छ र वास्तवमा परीक्षण मा अझै भेटेका छैनन् गरिएको भन्छन्। यस्तो अवस्थामा, दुर्लभ, तर तिनीहरू अझै पनि एक अप्रिय aftertaste छोड्नुहोस्।
छोराछोरीको मेडिकल सेन्टर (बर्नाउल), "छोराछोरीको स्वास्थ्य" - भनेर आफ्नो आगंतुकों सेवा र राम्रो मूल्यहरु को अनुकूल अवस्था प्रदान गर्दछ बहुमुखी क्लिनिक को एक परिवार छ। त्यहाँ एक आरामदायक र उच्च गुणस्तरीय चिकित्सा हेरविचार लागि सबै छ। आवश्यक छ भने, विशेषज्ञहरु पनि घर कल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ के आवश्यक!
को "बाल स्वास्थ्य" बर्नाउल मा बच्चाहरु र वयस्क लागि राम्रो चिकित्सा केन्द्र देख कुनै सिफारिस लागू हुन्छ। यो मुख्य रूप लगनशील डाक्टर, आफ्नो काम थाहा रोजगारी प्रदान गर्दछ। अस्पताल मा रहन अवस्था मात्र गर्नुहोस्। तदनुसार, चिकित्सा केन्द्र महत्त्वपूर्ण सान्त्वना र हेरविचार को गुणवत्ता निम्ति आदर्श छ।
नकारात्मक अनुभवबाट सिद्ध छैनन्, तर यो कम छ। र यो आमाबाबु र छोराछोरी भरोसा दिन्छ। अर्को शब्दमा, को "बाल स्वास्थ्य" - किफायती मूल्यहरु संग एक निजी क्लिनिक!
को रहस्यमय कोलेस्ट्रल के हो? महिला र पुरुष को लागि आदर्श।
कसरी हतियार अन्तर्गत पसिना को छुटकारा प्राप्त गर्न?
Anaphylactic आघात मा आपतकालीन हेरविचार
Platelets गिरा के भने
मेष र क्यान्सर ... तर मुख्य कुरा अनुकूलता प्रेम छ।
समायोजन वाल्व YaMZ-236। भारी ट्रक लागि डिजेल इन्जिन
तर विरोधी तनाव "छाला": समीक्षा, संरचना, प्रयोगको लागि निर्देशन। रूसी कस्मेटिक्स
मेष र लियोको संगतता। सम्बन्धको लक्षण
हरियो के हो? रंग को मनोविज्ञान
दर्जा, अनुप्रयोग जानकारी, समीक्षा: कुकुर लागि किर्नाले विरुद्ध स्प्रे